म्यूजिक भिडियोमा छाउँदै हेटौंडाका सुजन नेपाली (फोटो फिचर) – Google pati
म्यूजिक भिडियोमा छाउँदै हेटौंडाका सुजन नेपाली (फोटो फिचर)
जी. न्यौपाने हेटौंडा
२६ जेष्ठ २०७६ १०:०९
हेटौंडा ११ सिमलटारका २१ वर्षिय सुजन नेपाली यतिखेर म्यूजिक भिडियोमा छाउन थालेका छन् । करिब सातवटा म्यूजिक भिडियोहरुमा अभिनय गरिसकेका सुजनका म्यूजिक भिडियोहरु धमाधम रिलिज भइरहेका छन् ।
तारासितारा प्रोडक्सन्को रामशरण पृथकको शब्द र हेमन्त रुम्बाको आवाजमा रहेको “सल्काई दिप” बोलको गितको म्यूजिक भिडियोमा उनले पहिलो चोटी अभिनय गरेका थिए । त्यसपछि उनले एकपछि अर्को गर्दै म्यूजिक भिडियोहरुमा अभिनय गर्न थाले । साहयक भुमिकादेखि अभिनयको सुरुवात गरेका नेपाली अहिले प्रायः मुख्य भुमिकामा धमाधम देखा पर्दै छन् ।
यसै क्रममा उनले श्रीजना घिमिरेको शब्द र रुपक डोटेलको स्वर रहेको “सयौं जुनी” तिम्रै हुँ भन्छ्यौ, महेषकुमार ओली र कृष्ण राईको स्वर अनि सिताराम भट्टराईको निर्देशनमा निर्माण गरिएको म्युजिक भिडियो “थाहा नपाई” र हालसालै रिलिज भएको चर्चित गायक प्रमोद खरेलको स्वर र डा. डिआर उपाध्यायको रचना र कृष्ण पौडेलको निर्देशनमा निर्माण गरिएको म्यूजिक भिडियो “तिमी बिना”मा पनि उनले मुख्य भुमिकामा अभिनय गरेका छन् ।
उनले अभिनय गरेका दुईवटा म्यूजिक भिडियो छिट्टै रिलिज हुने नेपालीको भनाई छ । तारासितारा प्रोडक्सन् र निर्देशक कृष्ण पौडेल लगायतका व्यक्तित्वहरुका कारणले आफ्नो अभिनयको यात्रा सहज बन्दै गएको नेपाली भन्छन् ।